Ndege nyowani kubva kuAntigua kuenda kuBarbados neProvidenciales painterCaribbean Airways izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege nyowani kubva kuAntigua kuenda kuBarbados neProvidenciales painterCaribbean Airways izvozvi
Airlines • nhandare yendege • Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • avhiyesheni • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
InterCaribbean Airways yanga ichishandira Antigua kubva kuTortola kubvira 2015 nendege dzinosvika kaviri zuva nezuva nekubva kweAM nePM, ichipinda muEurope neUSA/Canada nendege pamwe nekubatanidza Antigua nendege kuenda kune mamwe maguta masere.
zvino, InterCaribbean Airways iri kufara kuzivisa sevhisi nyowani yeAntigua nenzvimbo mbiri nyowani dzeJet nonstop (ERJ145), inobatanidza Antigua (ANU) ne Barbados (BGI) nendege mbiri dzepasvondo dzekutanga, pamwe nesevhisi isingamire kubva kuAntigua (ANU) kuenda Providenciales (PLS).
The Barbados kubhururuka kunoenderera nekukasira kuenda kuGeorgetown ichangobva kuziviswa (GEO), Guyana ine maawa maviri ekubhururuka uye nguva pfupi yekufambisa. Iyo imwechete yekubatanidza nzvimbo muBarbados inopa kumberi zvakare kuSt Vincent neGrenadines (SVD), St Lucia (SLU) neGrenada (GND).
Kekutanga Eastern Caribbean ikozvino inogona kuwana jet service pakati peAntigua ne Barbados, uye zvichienda mberi kuGeorgetown, zvichiita kuti iyi ive yekubatanidza ndege inokurumidza munharaunda.
Sevhisi nyowani isingamire kuProvidenciales (PLS), Turks neCaicos Islands, inopa kubatanidza kuHavana (HAV), Cuba pamwe neNassau (NAS), Bahamas, uye Kingston (KIN), Jamaica. Vafambi vanogona ikozvino kubhururuka pakati peAntigua neHavana munguva isingasviki 4 maawa ekubhururuka achipa iyo inokurumidza kubatana iyo musika wakaona.
Ronga Antigua- Barbados-Antigua
Flight JY 797 inobva kuAntigua 2.30pm inosvika Barbados 3.35pm (Chitatu neMugovera)
Ndege JY 792 inobva Barbados 12.10pm, inosvika Antigua 1.15pm
Flight JY 794 inobva kuAntigua 1.45pm inosvika Providenciales 2.45pm* (Chitatu neMugovera)
Ndege JY 795 inobva Providenciales 10.30am, inosvika Antigua 1.30*pm
* 1-awa nguva musiyano muchando pakati Antigua uye Providenciales